Powder ukwakha umfutholuketshezi press Manufacturers - China Powder ukwakha umfutholuketshezi press Suppliers & Factory
Salt block umshini wokubacindezela
Idizayini ekhethekile ye-ZHENGXI HYDRAULIC umshini we-Yz 79 wokubacindezela we-SALT BLOCKS. Umshini wethu ubonakala ngokusebenza okuzinzile nangejubane elisheshayo, elingafinyelela umjikelezo owodwa wemizuzwana engu-15, futhi izesekeli ezisetshenziswa ngumshini zingamelana nokugqwala. Kufanelekile ukukhiqizwa ngobuningi kwamabhuloki kasawoti
Metal powder ukwakha cindezela wokubacindezela
Powder yokusansimbi cindezela wokubacindezela ubizwa nangokuthi powder owomile ukwakha cindezela wokubacindezela. Lolu chungechunge lwemishini ye-hydraulic ikakhulukazi i-hydraulic, enokuqina okusheshayo, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, isakhiwo somkhiqizo ofanayo namandla amahle.
Izingxenye zomshini: cindezela (kufaka phakathi iphakethe locingo lukazibuthe), isiteshi samaphampu we-hydraulic, ikhabethe lokulawula ugesi, uhlelo lokujova nokuxuba, ithangi elingenalutho; isikhunta Uhlaka, okuzenzakalelayo blank kokuthatha off umshini.